ZayYarHlaing: Please Let your generation knows about our Leader 1
Please Let your generation knows about our Leader 1
ဗိုလ်ချုပ်၇ဲ့ သမိုင်းဝင်ဓါတ်ပုံတွေထဲကတစ်ချို့ ပါ။
သူဟာကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်အတွက် ဘာတွေကြိုးစားခဲ့တယ်၊
မြန်မာပြည်ကိုချစ်တဲ့ မြန်မာပြည်သားတိုင်းသိပြီးဖြစ်ကြမှာပါ ...... နော်။
ဗိုလ်ချုပ်ကို ချစ်ခင်လေးစားအလေးပြုလျှက် ......
These are some pictures of General Aung Sann who sacrificed his whole life to get freedom for our county, Myanmar. I think I don't need to tell much about him because almost every Myanmar knows how hard he tried and how much he sacrificed his life asafreedom fighter.
With love and respect to our great General,
Yu Aung Lin.
0 comments: to “ Please Let your generation knows about our Leader 1 ”